“မိန်းက​လေးတို့ရဲ့ ဘဝကို အလွယ်​တကူ ပျက်​​စေနိုင်တဲ့ သကြားလုံး”....(လက်​ဆင့်ကမ်း​ပေးကြပါ အမျိုးတို့​ရေ) - MM Live News
“မိန်းက​လေးတို့ရဲ့ ဘဝကို အလွယ်​တကူ ပျက်​​စေနိုင်တဲ့ သကြားလုံး”….(လက်​ဆင့်ကမ်း​ပေးကြပါ အမျိုးတို့​ရေ)
April 13, 2019 MM Live
မိန်းက​လေးတို့ရဲ့ ဘဝကို အလွယ်​တကူ ပျက်​​စေနိုင်​တာမို့ shares ​ပေးခြင်းဖြင့်​ လက်​ဆင့်ကမ်း​ပေးကြပါ အမျိုးတို့​ရေ…
ဒီနေ့ မိတ်ဆွေ နဲ့စကားလက်ဆုံ ကြရင်း သူက လူကုန်ကူးမှူ့ တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ကို နမူနာပေး ပီး လူငယ်ထုအကြား အသိပညာ ဗဟုသုတရအောင် တကိုယ်ရေ အန္တာရာယ် ကာကွယ်နိုင်အောင် ဆိုတဲ့ ရည်ရွှယ်ချက်နဲ့ …..
ဒီနေ့ ခေတ် မှာအသုံးပြုနေတဲ့ ကာမစိတ်ကြွ ဆေး နမူနာတွေပြလို့၊ လူငယ်များ သတိထားနိုင်အောင် ပုံနဲ့တကွ ပြောပြလိုက်တာပါ။တကယ်တော့ လူငယ်ထုအကြား ဒီလို သကြားလုံး မျိုး စားမိရင် မိန်းကလေးငယ် တို့ စိတ်ကို မထိန်းနိုင်တော့ပါ ။မိမိတို့ အ ပျို ရည်ကို အလွယ်တကူ ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ အပြင် မှာကိုယ်နဲ့ သိပ်မ ရင်းနှီးသူ များ ရင်းနှီးသော် လည်း မိသားစုဝင် မဟုတ်သူများက ကျွေးသော အချိုရည် ကော်ဖီ လဘက်ရည် အအေး တို့ကို မသောက်ကြဘို့ အကြံပေးပါရစေ စသည့်တို့တွင် အလွယ်တကူ အရည် တစ်စက် နှစ်စက် ချပီး ရောစပ်လိုက်တာနဲ့ ပျော်ဝင်သွားနိုင် ပြီး….
သောက်မိလျှင် စိတ်လုံးဝ မထိန်းချုပ် နိုင်တော့ ဘဲ တဘက်သူ ပြုသမျှခံရ နိုင်ပါတယ်၊ သားကောင် ဖြစ်သွားပီး တဘက်သူရဲ့ ချု ပ်ကိုင် ခြင်း ခံရပီး ဘဝပျက်သွားနိုင်ပါတယ်။လူကုန်ကူးခြင်း ခံရနိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အသိသတိ ရှိရန် မျက်မြင် တွေ့ ရှိထားပီး သတိ ထားနိုင်အောင် တင်ပြ ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လူငယ်များအားလုံး အသိသတိရှိကြပီး ရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေ….. တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စောင့် ရှောက်နိုင်ကြပါစေ….။ orginal writer
မိနျးက​လေးတို့ရဲ့ ဘဝကို အလှယျ​တကူ ပကျြ​​စနေိုငျ​တာမို့ shares ​ပေးခွငျးဖွငျ့​ လကျ​ဆငျ့ကမျး​ပေးကွပါ အမြိုးတို့​ရေ…
ဒီနေ့ မိတျဆှေ နဲ့စကားလကျဆုံ ကွရငျး သူက လူကုနျကူးမှူ့ တိုကျဖကျြရေးအဖှဲ့ကို နမူနာပေး ပီး လူငယျထုအကွား အသိပညာ ဗဟုသုတရအောငျ တကိုယျရေ အန်တာရာယျ ကာကှယျနိုငျအောငျ ဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြနဲ့ ….
ဒီနေ့ ခတျေ မှာအသုံးပွုနတေဲ့ ကာမစိတျကွှ ဆေး နမူနာတှပွေလို့၊ လူငယျမြား သတိထားနိုငျအောငျ ပုံနဲ့တကှ ပွောပွလိုကျတာပါ။တကယျတော့ လူငယျထုအကွား ဒီလို သကွားလုံး မြိုး စားမိရငျ မိနျးကလေးငယျ တို့ စိတျကို မထိနျးနိုငျတော့ပါ ။မိမိတို့ အ ပြို ရညျကို အလှယျတကူ ပကျြစီးစနေိုငျပါတယျ။
ပွီးတော့ အပွငျ မှာကိုယျနဲ့ သိပျမ ရငျးနှီးသူ မြား ရငျးနှီးသျော လညျး မိသားစုဝငျ မဟုတျသူမြားက ကြှေးသော အခြိုရညျ ကျောဖီ လဘကျရညျ အအေး တို့ကို မသောကျကွဘို့ အကွံပေးပါရစေ စသညျ့တို့တှငျ အလှယျတကူ အရညျ တဈစကျ နှဈစကျ ခပြီး ရောစပျလိုကျတာနဲ့ ပြျောဝငျသှားနိုငျ ပွီး….
သောကျမိလြှငျ စိတျလုံးဝ မထိနျးခြုပျ နိုငျတော့ ဘဲ တဘကျသူ ပွုသမြှခံရ နိုငျပါတယျ၊ သားကောငျ ဖွဈသှားပီး တဘကျသူရဲ့ ခြု ပျကိုငျ ခွငျး ခံရပီး ဘဝပကျြသှားနိုငျပါတယျ။လူကုနျကူးခွငျး ခံရနိုငျပါတယျ၊ ဒါကွောငျ့ အသိသတိ ရှိရနျ မကျြမွငျ တှေ့ ရှိထားပီး သတိ ထားနိုငျအောငျ တငျပွ ရေးသားခွငျး ဖွဈပါတယျ။
လူငယျမြားအားလုံး အသိသတိရှိကွပီး ရှောငျရှားနိုငျကွပါစေ….. တဈဦးနဲ့တဈဦး စောငျ့ ရှောကျနိုငျကွပါစေ….။orginal writer
တာဝန်ပျက်ကွက်မှာကြောက်လိုိ့ သားလေးကို ဆေးရုံတင်နောက်ကျခဲ့ရတဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ် ဖြစ်ရပ်မှန်
နှလုံးရောဂါသည် သမီးလေးကို The Voice သတင်းစာမှာ အလှူ ခံပေးတဲ့ ပိုစ်ပါလာလို့ ဆေးရုံရဲ့ပုံရိပ်ကို ထိခိုက်လို့ဆိုပြီး ဆေးရုံမှ ခွဲစိတ်မပေးတော့
March 9, 2019 MM Live
ဝူဟနျဗိုငျးရပျဈပိုးဟာ ၂၀၂၀ မတျလမှာ တဈကမ်ဘာလုံး ပြံ့နှံကူးစကျနိုငျကွောငျး တရားဝငျ သတိပေးပွောဆို
January 28, 2020 MM Live News
နတ်တလင်းပွဲပျက် ရတဲ့ကိစ္စ သားငယ်ပြောပြီ
November 11, 2018 MM Live News